musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Japan Kuputsa Nhau » Murume anoedza kutanga moto pachitima cheJapan chinomhanya kwazvo
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • Japan Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Rail Kufamba • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Murume anoedza kubatidza moto pachitima cheJapan chinomhanya kwazvo.
Mudzimu wemoto, uyo asina kuramba kusungwa, akazoudza mapurisa kuti "akaedza kutevedzera" banga reHalloween uye kurwisa kwekupisa pachitima muTokyo mwedzi wapfuura, iyo yakaona murume ane makore makumi maviri nemana akapfeka sekukuvadza kweJoker. Vafambi 24 vasati vasungwa.
Murume akaedza kuisa chitima chekuJapan chekumhanya-mhanya pamoto mukurwiswa kweMuvhuro kunoshamisa.
Arsonist akasungwa nemapurisa eJapan akapinda muchitima pakarepo mushure mekumira kwekukurumidzira.
Chiitiko chemusi weMuvhuro mangwanani chakonzera kunonoka mumasevhisi echitima anosvika maminetsi makumi mashanu.
Mumwe murume ane makore 69 okukura akasungwa mushure mekubudisa mvura inobvira uye achiedza kubatidza moto muchitima chinomhanya zvikuru muJapan.
Vanhu vangangosvika makumi matatu vanga vachifamba nemotokari imwe chete neyakapisa pakaitika chiitiko ichi mangwanani eMuvhuro. Vafambi vese vakakwanisa kutiza vakachengeteka vachienda kune dzimwe mota uku kondakita wechitima achidzima moto.
Arsonist akasungwa nemapurisa eJapan akapinda muchitima pakarepo mushure mekunge chamisa emergency.
Chiitiko chanhasi chakonzera kunonotsa mukati chitima masevhisi anosvika maminitsi makumi mashanu.
Kwakange kune zvimwe zvakafanana kurwisa muJapan munguva pfupi yapfuura. Munguva pfupi yapfuura pakati paOctober, mumwe murume akabaya vamwe vafambi vaviri pachiteshi chechitima Tokyo. Muna Nyamavhuvhu gore rino kuputika kwechitima chevanhu muguta guru reJapan kwakasiya vanhu vapfumbamwe vakuvara.